Mpiserasera ao Kyrgyzstan misafoaka amin’ny dobo iray fikarakarana feso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2015 6:34 GMT
Toeram-piompiana feso (dauphin) ao Kyrgyzstan. Sary avy amin'ny Kloop.kg, nahazoana alalana.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org. Navoaka indray rehefa nahazoana alalana.
Rehefa nampanetry tena vetivety ny Parlemanta ao amin'ny firenena, dia nitodika any amin'ireo mpibaiko feso ny fikambanana slackvist ao Kyrgyzstan.
Nipoitra sy niely tamin'ireo famoaham-baovao lehibe ny fahatezerana an-tserasera rehefa nipongatra tao amin'ny faritra manora-panala ivelan'ny renivohitra Bishek ny toeram-piompiana feso iray.
Nilaza ny mpikarakara biby am-pitiavana fa fandisoana mampididoza ny tokony ho izy ity raharaham-barotra iray manontolo ity – mihalangalana ny mpikarakara, manizingizina fa hankafy ny fitoerany ato anatin'ity firenena anjakan'ny hatsiaka mamirifiry ity ireo biby an-dranomasina ireo.
Nilaza ny mpanohana ny toeram-piompiana feso ao amin'ny biraon'ny Ben'ny tanàna fa hiasa amin'ny faraparan'ity volana ity mandrapahatonga ny volana mey izy ity ary ity ho afaka milomano miaraka amin'ireo zavaboary ireo ny mpitsidika.
Voarara any amin'ny toerana maro eto amin'izao tontolo izao ny Toeram-piompiana feso mandehandeha, fa manivaka sy miavaka amin'izany koa i Belarosia, Kazakhstan, Indonezia ary Rosia, hoy ny vondrona mpanandra-peo iray. Tsy manana lalàna mandamina na mampanao azy ho tsy ara-dalàna kosa ny firenena hafa tahaka an'i Kyrgyzstan.
Amin'ny fahafantarana ny fomba fikarakara lany andro sy mampalahelo any amin'ny valam-biby fahita any amin'ny faritra Sovietika taloha dia tsy manana antony inoana ny mety isian'ny fikarakarana tsara ireo feso efatra sy trozona iray ry zareo mpanohitra ity toerana vaovao miorina ao Bishkek ity.
“Toeram-panambakana avokoa ny toeram-pikarakarana feso rehetra, tsy miankina amin'ny habeny na ny hatsarany izany. Tokony hiaina any an-dranomasina ny feso!” hoy ny fitroatran'ny mpaneho hevitra iray ao amin'ny Facebook.
Saingy namelaka ny mpitsikera amin'ny hoe “miditra amin'ny tsy tokony idirany” i Taras Zhimarev, iray amin'ny mpikarakara ny toeram-pikarakarana feso tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny tranonkalam-baovao Kloop. Ho tsara karakara ny biby, hoy ny fampanantenany, ary “mety ho faty ao anatin'ny roa andro raha alefa hirenireny any amin'izay tiany”.
Naneso ankolaka i Zhimarev tamin'ny fanamarihan'ireo mpiaro ny zon'ny biby.
“Tian'ny feso ny manao ireny zavatra ireny,” hoy izy. “Raha efa nahita ny fitsambikinany teny an-dranomasina ianao, dia zavatra mitovy amin'izany indrindra no ataony ao.”
Tsy i Zhimarev irery no mirintona tamin'ny fivoahana tampoka ‘ireo vondron'olona ao amin'ny firenena te-hiahy ny mahasoa ny biby, rehefa teny an-dalàna ho ao an-tanàna ireo biby tsy fahita ireo.
“Andriamanitro ô, ireto Greenpeacers mandrakizay ireto, mpiaro mandrakizay ny biby, avelao fotsiny izahay mba hahita ireo feso ireo. Nefa anie hita amin'ny tele hatrany ireo e. Rehefa tsy tianao io dia mipetraha any an-trano dia any manao fihetsiketsehana betsaka,” hoy fitarainan'ny mpaneho hevitra iray tsy fantatra anarana iray tao amin'ny fitsapan-kevitra iray tao amin'ny Knews.
Nilalao henjana ireo mpanao fanentanana manohitra ny toera-pikarakarana feso, nampiely sarin'ny feso mijaly avy ao Rosia fa tsy nolazaina ny niaviany ao amin'ny sata Facebook sy Twitter. Saingy efa tsy nivonona ny hemotra ny ao amin'ny biraon'ny Ben'ny tanàna.
Efa hita rahateo fa tsy nahomby ny fanangona-tsonia entina hanoherana toeram-pialamboly tahaka izao tao Kazakhstan, na dia teo aza ireo sonia an'arivony nangataka tamin'ny Filoha Nursultan Nazarbayev hahatsiaky ny nahazo ny trozona Beluga iray nantsoina hoe Dale, izay maty noho ny olana ara-kafanana tamin'ny fitetezatany manerana ny firenena Aziatika Afovoany nataon'ny toera-pikarakarana feso manana foibe ao Moskoa tamin'ny 2010.
Ka mety tsy ho tazana eny amin'ny faravodilanitra ny fiverenan'ny fanentanana fampahamenarana antserasera izay hiafara amin'ny fitsipahana tolobidy ao amin'ny parlemanta hanoloana toerana 100 amin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka amin'ny oktobra.
Nankalazaina ho fandresen'ny faharomotana amin'ny milim-panjakana, manangana finoana amin'ny herin'ny fisantaran'andraikitra mahaolompirenena hampielezana fiovana ara-politika tena izy ao amin'ny repoblika ny fanentanana #seza120 ao amin'ny parlemanta.
Saingy nahomby ilay fanentanana satria ireo natao fihomehezana tao amin'ny firenena, olona matahotra mpanao lalàna no hany tokona nahazo tombontsoa tamin'ireo seza fanampiny tao amin'ny parlemanta.
Raha eo amin'ny politikan'ny fiainana an-dranomasina indray, miatrika fanoherana mbola tsy mihontsona sy manana fientanam-po falifaly kokoa ny fitiavam-bahoaka feso ao Kyrgyzstan: dia ny fitiavam-bahoaka feso ao Kyrgyzstan.